Puri Rath Yatra 2018 Packages | Wac: + 91-993.702.7574
Ma waxaad tahay qof dhab ah oo Hinduism ah? Raadinta meel diimeed oo qiimo leh kuugu imanaysa inta aad ku nooshahay, wax ku dar Puri Rath Yatra 2018 liiskaaga! Waa hagaag, Puri Rath Yatra waa runtii wax lagu barto ugu yaraan hal mar noloshooda.
Markhaati furka ugu weyn aduunka Rath Yatra, halkaas oo ilaahyada ka soo baxa macbudka, jebinta caqliga diinta, diinta, iyo caqiidada in ay farriin u diraan farriinta midnimada. Noocyada caanka ah, gawaarida waaweyn, hawada qoyan ee duufaan deg-deg ah iyo diinta jaceylka ah waxay ka dhigi doontaa xaflad xafladeed ee Hindiya, Rath Yatra 2018 dhacdo mid ka mid ah nooca.
Rath Yatra oo adduunka u caan ah ayaa lagu dabaaldegay fanaanad, dareen diineed iyo ruux maskaxda ah. Codka wanaagsan ee suxufiyiinta, daboolka, iyo muusikadu waxay dareensan yihiin sida jannada ay dhulka ugu dhacday munaasabadda. Waxaa la aaminsan yahay in haddii aad gaadhsiineyso gaadhiga - marwalba waxaad ka helaysaa marinkaaga jannada. Oo, midna kama mid ahayn meeraha aduunka oo dhan Puri Rath Yatra 2018!
SandPebbles waxay bixisaa baakado aad u fiican Puri Rath Yatra Tour, si aad u hesho safar aan xor ah lahayn iyo hoy ah inta lagu jiro saacadaha ugu dhaqsaha badan ee magaalada. Haddii aad rabto inaad ka safartid Bhubaneswar ama aad ku jirto magaalada inta lagu jiro Puri Rath Yatra, waxaynu diyaarineynaa dhammaan ballamihii huteelada si aad u raacdid, safar, iyo dhamaanba, si aad u noqotid safarkaaga rabbaaniga ah. Our Xirmooyinka Puri Rath Yatra 2018 waxaa ka mid ah:
Mid ka mid ah wakiilkeena ayaa ku qaabilaya Garoonka Caalamiga ah ee Biju Patnaik, Bhubaneswar oo ku martiqaadaya hudheelka. Haddii duulimaadku yimaado subaxdii, waxaad booqan kartaa Smart City ama waxaad ka bixi kartaa Puri, oo kaliya 60 Km oo ka socda magaalada. Cuntada ayaa lagu qaban doonaa hoteelka.
Kadib quraac ayaa u safraya Puri en-route booqasho ku tagto Dhauli (Ashokan Rock Edict iyo Shanti Stupa), Pipili (Applique Work Village), Sakshigopal (Radha Krishna Temple) & Raghurajpur / Naikpatna (Sawirka Ragga). Imaanshada at Puri, Ka soo gal hudheelka. Booqashada habeenkii ee Lord Jagannath Temple si looga qaybgalo Live Aalati Darshan (Non-Hindus lama oggola gudaha gudaha). Uma baahnid inaad booqato "Char Dham" si aad u gaarto "Moksha" (badbaadada), markaad booqato Temple Puri. Ku noqo qolka huteelka.
Kadib quraac kadib u gudbiya Puri Badadanda. Qorshe gaar ah ayaa lagu sameeyey hudheelka hudheelka oo lagu daawanayay Rath Yatra. Haddii aad rabto in aad Rath Yatra ka aragto qulqulatada si haboon subaxa hore. (Quraacda quraacda, dhalada biyaha, qado qashinka ah (veg) ayaa lagugu siin doonaa.
Quraac ka dib, u diyaari diyaarka. Booqo Narendra Pokhari, Temple Lokanath, Temple Markandeshwar, Lakshmi Temple, Temple Ganesh, Temple Gundicha, Swargadwar, Raghurajpur Village Artist, Temple Bimala & waxyaabo kale oo badan. Ku soo laabo hudheel oo casho iyo hurdo fiican habeenkii.
Meelo loogu talagalay dadka xajka badan, kuwaas oo u yimaada qaadashada cirifka dhaqidda dhaqameed. Mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan Hindiya, halkaas oo biyaha bata ee Bay of Bengal ay bixiyaan qadarka quruxdooda. Waxaad ku raaxeysan kartaa hirarka qaboobaha ah ee fadhiya dhinaca hore ee xeebta oo leh maadada jimicsiga barafka iyo waxyaabo kale oo cunto ah ama tagaan wadada dheer ee wadada Puri-Konark Marine Drive.
Midna kama maqnaan karo farshaxanka laga helo Puri. Raadi quraar dahab ah oo dahab ah, sidoo kale waxaad soo iibsataa Sambalpuri iyo Bomkai gacmahoodu waxay kugula wareegi doonaan shaqo adag.
Marka laga reebo ka qayb galka Bandhigga Ratha Yatra, safarada safarka ee Puri waxay raadin karaan fursado dalxiis oo kale oo qiimo leh. Puri Beach, Konark Beach, Konark Sun Sun Temple waa qaar ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee dalxiisyada ku yaalla ee Puri. Ka dib quraacda booqo Konark Sun Temple, Madxafka ASIl (Xiritaan Jimce), Ramchandi Temple & Chandrabhaga Beach. Kursiga xorta ah wuxuu ka baxaa xeebta dahabka ah wuxuuna ku raaxeeyaa suuqa xeebta ee Puri. Habboon habeenkii Puri.